MATLAB – Dr Myo Thida
MATLAB ရဲ့အဓိက အားသာချက်တွေထဲက တခုက ပုံတွေ ဆွဲရတာ လွယ်ကူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပုံကတော့ Amplitude မတူညီတဲ့ Cosine wave Form များကို ပုံတခုထဲမှာ ရေးဆွဲတာ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယပုံကတော့ Surface Plot ကို ရေးဆွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို ရေးနိုင်ဖို့ အတွက် MATLAB မှာ Line 10 ကြောင်း – 15 ကြောင်းခန့် ပဲ လို အပ်ပါတယ်။ Dr Myo Thida ၏ Introduction to MATLAB စာအုပ်ထဲမှ သင်ခန်း စာ အချို့ ကို graphics_MATLAB_1 မှာ ရယူContinue reading “Graphics in MATLAB”
Posted bydrmyothida February 7, 2018 February 7, 2018 Posted inMATLAB1 Comment on Graphics in MATLAB
3D Surface Plot တခုကို ဘယ်လို Animation လုပ်မလဲ .. ရှိပြီးသား function ကိုပဲ ယူသုံးမလား.. ကိုယ်တိုင် function ရေးမလား. . MATLAB မှာ တော့ ရေးရတာ လွယ်ပါတယ်. စာကြောင်း ၄ – ၅ ကြောင်းကို အခြေခံပြီး ရေးလို့ ရတဲ့ အတွက်.. MATLAB နဲ့ပရိုဂရမ်ရေးရတာ.. ပျော်စရာကောင်းသလို .. စိတ်ချမ်းသာဖို့ လဲ ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ. အောက်ပါ လင့် မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ surfplot
Posted bydrmyothida July 27, 2017 Posted inMATLABLeaveacomment on 3D surface Animation
iSTARzoombie This is the main file. Change the file extension to .m. In this program,azombie (a lazy student shown in Red) looks for the nearest targets (students shown in Yellow STARs) in the classroom and persuade them to be zombies (lazy). Surprisingly, there are only few students who can survive from the zombies.Continue reading “MATLAB – zombie program”
Posted bydrmyothida July 24, 2017 Posted inMATLABLeaveacomment on MATLAB – zombie program
MATLAB Simple Program ဒီ code လေးက လက်ရှိ iSTAR မှာ တက်ရောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အသက်ကို အကြမ်းဖျင်း ဆန်းစစ်လိုတဲ့ အတွက် ချရေးဖြစ်တဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Program မှာ အပိုင်း ၂ ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ပထမ တပိုင်းကတော့ ရှိ ပြီးသား data အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ အသက် အပိုင်းအခြားကို ဆန်းစစ် ကြည့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ပထမတပိုင်းရဲ့အဖြေ ဖြစ်ပါတယ်။ studentAges ဒုတိယတပိုင်းကတော့ ကိုယ့် အတန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့အတွက် မွေး သကရာဇ်Continue reading “MATLAB Simple Program – Analyze Ages”
Posted bydrmyothida June 23, 2017 June 23, 2017 Posted inMATLABLeaveacomment on MATLAB Simple Program – Analyze Ages
ကိုယ့် သင်တန်းကို တက်ဖူးခဲ့တဲ့ လူတွေ ရော.. တက်နေဆဲ လူတွေ ရော.. ဒီ မှာပေးထားတဲ့ problem ကို ဖြေရှင်း ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန် Traffic နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Project ကို အခြေခံထားတဲ့ Problem လေးပါ။ သင်္ချာ ဘယ်သဘောတရားကိုလဲ အခြေခံသလဲ ဆိုတာပါ တွေး ကြည့် စေချင်ပါတယ်။ b1 b2 b3 b4 b10101 b200 10b3 100 1 b4 1 1 1 0Continue reading “MATLAB – MATH CONCEPT”
Posted bydrmyothida May 11, 2017 May 11, 2017 Posted inMATLABLeaveacomment on MATLAB – MATH CONCEPT